कपडा विवाह: विशेषताहरू, दृश्य र समीक्षा। विवाह लागि ढाँचा शाल
विवाह - सबैभन्दा सुन्दर दिन को एक। धेरै दुल्हन र Grooms श्रद्धा र अघिबाटै जान्ने काम उहाँलाई पर्खिरहेका छन्। आज, धेरै जवान मानिसहरू गिर्जाघर वा चर्चमा विवाह को sacrament पारित गर्न मात्र होइन रजिस्ट्री कार्यालय मा, आफ्नो वैवाहिक बन्धन मुहर गर्न इच्छुक, तर पनि हो।
विवाह के हो? यो समारोह को रहस्य को अर्थ के हो?
विवाह मसीही मण्डली को सात sacraments को एक भनिन्छ। यो दुई मान्छे प्रभु अघि बीच एक सम्बन्ध छ। बस विवाह "चर्च विवाह" वा "धार्मिक विवाह" भनिन्छ।
प्रत्येक जोडी व्यक्तिगत विकल्प - जब यो समारोह आयोजित। तपाईं रजिस्ट्री कार्यालय मा समारोह पछि तुरुन्तै विवाह गर्न सक्छन्, तर तपाईंले केही समय प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मामला मा, यो पहिले त्यो सम्झना गर्नुपर्छ चर्च मा विवाह भएको नवविवाहितहरूका विवाह दर्ता को प्रमाणपत्र देखाउन आग्रह गरे। तपाईं sacraments को मिति निर्धारण गर्न अघि, यो धेरै नवविवाहितहरूका अनुसार, कुनै पनि दिन टाढा गर्न सकिन्छ रूपमा, वर्तमान वर्षको लागि विवाह पात्रो अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
विवाह लागि दुलही पोशाक
हरेक केटी मा उनको विवाहको दिन सुन्दर छ, तर बेल केप मा दुलही, कोमल सुन्दर र रहस्यमय डबल। Headscarf विवाह लागि दुलही को सौन्दर्य बन्द सेट र क्षण को solemnity अन्डरस्कोरहरू। पुरातन समयका देखि, यो सहायक, एकै समयमा एक सरल र शिष्ट, नम्रता, शुद्धता र स्त्रीत्व दुलही को एक प्रतीक थियो।
तपाईं एक चर्च वा गिर्जाघर आफ्नो संघ पवित्र बन्धन कस्नु छ भने, पर्दा एउटा उत्कृष्ट वैकल्पिक रूपमा विवाह लागि headscarf विचार गर्न निश्चित हुन। उहाँले Orthodoxy सबै परम्परा पूरा हुनेछ भनेर साँच्चै अविस्मरणीय छवि बनाउन सक्षम हुनेछ।
विवाह पोशाक कुरा
रंग। सेतो विवाह पोशाक - युरोप बाट हामीलाई आएको छ कि एक परम्परा। रूस मा, यो कुनै पनि रंग भेषमा विवाह गर्न सम्भव थियो। मात्र नियम पालन छ: outfit, पर्याप्त उज्यालो हुन थियो यो चमक र विविधता हुन थिएन। धेरै गाढा र गाढा कपडे काले, गाढा बैजनी, गाढा खैरो रंग चयन छैन। अन्य सबै रंग एकदम उपयुक्त छन्।
लम्बाइ। विवाह पोशाक को गोडा माथि हुनु हुँदैन। क्याथोलिक परम्परा लामो रेल संग कपडे छन्। चर्च नेताहरूले यस्तै पोशाक मा दुलही दोष असम्भाव्य हो, तर यो अर्थोडक्स परम्पराअनुसार आदर भुक्तानी गर्न र लुपमा बिना गर्न राम्रो छ।
शैली विवाह पोशाक केहि हुन सक्छ, तर दुलही रुचि बन्द गर्न राम्रो छ। आदर्श विकल्प लामो आस्तीन, खोक्रो neckline एक पोशाक हुन र फिर्ता बन्द थियो। को बाहुला छोटो हुन सक्छ, तर मुख्य नियम - पछाडि र काँध बन्द गर्न। तपाईं आफ्नो छाती मा एक खुला फिर्ता वा गहिरो कट संग गिर्जाघर वा चर्च प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
विवाह लागि शाल: उहाँले चाहनुहुन्छ?
को क्लासिक प्रतिबद्ध छन् केटीहरू, अक्सर बहु-पत्र रुचि लामो पर्दा। व्याकुल सपनाहरु देखने र रोमान्टिक जवान महिलाहरु फूल र रिबन को माला संग टाउको सजाउनु। र अर्थोडक्स दुल्हन अक्सर एक रुमाल आफ्नो टाउको कवर, वेदी अघि देखा पर्न पर्याप्त। र, यो उल्लेख गर्नुपर्छ, गल्ती थिएन! को अर्थोडक्स परम्पराअनुसार एक आदर - विवाह को लागि पारंपरिक वा बेल रूमाल। त्यहाँ जो यो वृद्धि गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ कम्तिमा तीन कारण छन्।
यो साँच्चै सुन्दर छ। , पतन जो सफासँग टाउको र दुलही को काँध संग Folds एक weightless बेल कपडा, बनेको विवाह लागि शाल - एकै समयमा, अर्को उज्ज्वल छ र, आध्यात्मिकता, रहस्य र कोमल एक आभा सिर्जना गर्नेछ जो उनको outfit एउटा कोमल स्पर्श।
यसलाई मूल छ। पाँचवटा दुल्हन तीन नै सामान्य पर्दा मा वेदी जाने देखि दुलही, छवि स्मरणीय र रोचक बनाउन हुनेछ विवाह लागि शाल। तसर्थ, एक दिन तीन वा बढी जोडी संग पहनाया यदि, तपाईं प्राप्त एक विदेशी पृष्ठभूमिमा नष्ट गर्न सक्दैन।
यो चर्च को canons उल्लङ्घन छैन। चर्च परम्परा चर्च प्रवेश गर्नु अघि आफ्नो टाउको ढाक्न महिला चाहिन्छ। यस मामला मा, विवाह समारोह चलिरहेको बेला दुलही अनुहारमा सधैं खुला हुनुपर्छ। तसर्थ, यस मामला मा, पर्दा - यो सबै भन्दा राम्रो विकल्प, यो अक्सर आफ्नो टाउको कवर छैन, टाउको पछाडि संलग्न छ देखि छ, वा धेरै पत्रहरू, एक जो आफ्नो निधारमा मा pounce गर्न चर्च प्रवेश मा दुलही छ। विवाह लागि शाल पनि दुलही को सौन्दर्य मा यसरी अतिक्रमण छैन को परम्परा पालन गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, उहाँले खुला वा खुला काँध कि फिर्ता, सबै "स्वतन्त्रता" कपडे कवर गर्न सक्षम हुनेछ।
प्रकार विवाह लागि स्कार्फ
शैली को विकल्प आफ्नो प्राथमिकता, इच्छा र कटौती विवाह पोशाक मा सम्पूर्ण निर्भर गर्दछ।
बेल आस्तीन र हुड संग केहि pugovichek बोलेरो buttoning रूपमा विवाह लागि शाल स्पष्टवादी cleavage रोजेको गर्ने दुल्हन लागि, तर पनि तंग, सुरुचिपूर्ण कपडे, अनावश्यक विवरण uncluttered मा नवविवाहितहरूका लागि मात्र सही छ। यस्तो अवस्थामा, एक केप पूरा outfit बनाउन।
विवाह पोशाक bodice मोती, जटिल कढाई वा कृत्रिम फूल सजिएको भने, दुलही पूर्ण बन्द गरेको छ वा एउटा मात्र कस्नु थियो मोडेल लागि रोज्न गर्नुपर्छ।
Volumetric "cloak", तल्ला पुग्न सक्छन् जो को लम्बाइ रोमान्टिक केटी कदर हुनेछ। र साटन drawstring र drawstring केसिङ एक रूमाल गर्न अपील गर्नेछ सबै Delights को brevity र सादगी रुचि गर्ने दुल्हन।
सबै ट्रेडों को दुलही र दुलहा-मालिकको सजिलै आफ्नो आफ्नै हातले विवाह लागि शाल erected। तपाईं यसलाई कसरी गर्छन्?
आफ्नै हातले विवाह लागि शाल
तपाईं साटन, उच्च गुणवत्ता tulle, रेशम, बेल, बेल कपडा, वा अन्य वायुमय र सुरुचिपूर्ण कपडे को खण्ड मा शेयर गर्न आवश्यक सबै को पहिलो। , सौन्दर्य र दुलही को शुद्धता को एक प्रतीक त यो एक फोडा-र-सेतो रंग चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ - विवाह को लागि कि रुमाल सम्झना।
साथै, तपाईं कपडे, रिबन, मोती वा सजावट र एक सिलाई मेशिन लागि रिबन एउटा मुद्दा मिल्ने रंग आवश्यक हुनेछ। र, को पाठ्यक्रम, विवाह शाल ढाँचा लागि।
काम सरल तर laborious हुनेछ।
यो कपडा सर्कल जसको व्यास भविष्यमा रुमाल को आकार मा आधारित निर्धारण गर्न छ को एक टुक्रा काट्न गर्नुपर्छ।
केन्द्र एक सीधा लाइन मा कटौती।
टोपी लागि cutout गर्नुहोस्। यो केन्द्रमा ठीक छैन कि सम्झना!
थप यसलाई आधा सामाग्री को दोस्रो टुक्रा पल्टिने र एक आयत रूपरेखा गर्न आवश्यक छ। यसको चौडाइ आधा विभाजित छ जो घाँटी, को मंडल बराबर छ, र उचाइ हुड को अपेक्षित उचाइ बराबर छ (उचाइ र विवाह Hairstyles पालन!)।
को केप गर्न हुड सी, किनारा व्यवहार र जिप सी।
तयार रुमाल! सुन्दर र अनुपम हुन!
कसरी प्राकृतिक रंजक संग अन्डा डाई - इस्टर लागि तयार
Sledok बुनाई। Sledkov - आरामदायक र सुन्दर
कसरी कागज बाहिर एक घन बनाउन - केही सरल सुझाव
आफ्नै हातले सुट पाठो: द्रुत विभिन्न विकल्प कसरी बनाउने
के बिरालोहरु एक मास्क आवश्यक भएमा?
रूस सबै मानिसहरू भनिन्छ किन बहिनी छन्: विगत र वर्तमान
Rodd Yessentuki: ठेगाना, डाक्टर बारे समिक्षा
शाही कोर्ट होटल4* (प्राग, चेक गणतन्त्र): होटल को वर्णन, मूल्यांकन
बाल सीधा जब तपाईं स्वीकार जो सबैभन्दा गम्भीर त्रुटिहरू,
किन जहाज को सपना?
बार्बी केक: नुस्खा
तुलिप्स digging गर्दा
एक यात्री विमान उडान को अधिकतम उचाइ
इन्टरनेट मार्फत सञ्चार माध्यमका लागि एक कार्यक्रम: लोकप्रिय उत्पादनहरूको अवलोकन
विरोधी विमान मिसाइल सिस्टम "घन": सिर्जना, वर्णन, रूपको इतिहास
CARNABY - जूता: फोटो, समीक्षा